Kismaayo News » Afmadow oo Xalay la mirey
Afmadow oo Xalay la mirey
Xarakada Alshabaab ee ka arimisa magaalada Kismaayo ayaa xalay weerar mir ah ku qaaday ciidamada huwanta ah saldhigyada ay ku leeyihiin magaalada Afmadow. Shacabka magaalada ayaa xalay ku baraarugey daryaanka madaafiicda iyo rasaasta la isku waydaarsadey halkaas iyadoo aan illaa iyo hadda la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalkan dhimasho iyo dhaawactoona.
Xarakada Alshabaab ayaa maalmahan kordhisey weerarada kadiska ah ee ay ku qaadayaan ciidamada huwanta ah iyadoo aan la ogeyn goorta ciidamada huwanta ahi horey ugu ruqaansan doonaan magaalada hodanka ah ee Kismaayo oo ay yoolkoodu yahay.
Masuuliyiin u hadashay ciidamada Raaskambooni iyo kuwa dawladda KMG ah ayaa sheegey iney qabsandoonaan Kismaayo ka hor 20 ka bisha August oo ah xiliga kala guurka dawladda lana dooran madaxweyne cusub. Hogaamiyayaasha ciidamada Kambooni iyo kuwa TFG ayaa labaduba ka maqan magaalada Afmadow kuna sugan magaalada Nairobi.
Bishii May ayay ahayd markii ciidamada huwanta ahi ay la w